Jereo ny sasany amin'ireo fomban-drazana mahaliana any Sina | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Shina, General
La Ny kolontsaina sinoa dia iray amin'ireo tranainy indrindra eto an-tany ary koa iray amin'ireo be mpampiasa sy be pitsiny indrindra. Tsy azo atao ny manafina izay rehetra voalaza ao anatin'ny teny vitsivitsy, fa hanomboka amin'ny fomba amam-panao sinoa malaza indrindra izahay izay nahatonga ny fahalianan'ny mpitsidika erak'izao tontolo izao. Ny sasany dia fomban-drazana ankalazaina efa an-jatony taona maro ary ity kolontsaina ity dia manaitra antsika foana satria efa antitra sy tsy mitovy amin'ny antsika.
Ho haintsika izany ny sasany amin'ny fomban-drazana ao Shina ampahany amin'ny kolontsain'izy ireo izany ary angamba efa henontsika. Alohan'ny hitsidihanao firenena dia zava-dehibe foana ny manontany momba ny fomba amam-panaony sy ny kolontsainy mba hahatongavantsika miaraka amin'ny hevitra momba izay ho hitantsika.
1 taom-baovao Sinoa
2 Fetibe fanilo
3 Dragona sinoa
4 Lanonana dite sinoa
5 Akanjo sinoa nentin-drazana
6 Andro fialantsasatra nentim-paharazana
Samy nahare ny amin'ny Taom-baovao Sinoa ny tsirairay satria mankalaza azy amin'ny daty hafa noho ny eran'izao tontolo izao. Fomban-drazana iray izay manintona ny saina betsaka, satria eran'izao tontolo izao ny fifantohana dia ny 31 desambra ho faran'ny taona hanombohana hanisa taona iray hafa, fa any Shina kosa tsy izany. Amin'ny Shina dia tantanan'ny kalandrie lunar, miaraka amin'ny fiandohan'ny taona amin'ny andro voalohan'ny volana izay mety miovaova isan-taona. Ao anatin'ny 45 andro aorian'ny solstice amin'ny ririnina ary 45 andro alohan'ny fahatongavan'ny lohataona. Toa rehefa manomboka ny taona dia tsy maintsy manokatra varavarana sy varavarankely ny Sinoa mba hamoaka ny taona teo aloha ary hanome lalana ny zava-baovao rehetra ho avy.
Aorian'ny 15 andro amin'ny taom-baovao ny malaza e fetibe fanilo mahatalanjona any amin'ny faritra samihafa any Sina. Amin'ity festival ity, ny zava-drehetra dia miakanjo ny lanterne sinoa mahazatra izay efa hitantsika efa an-jatony ary nohazavaina hamenoana ny zava-drehetra amin'ny hazavana sy loko. Mba hamaranana ny fankalazana ny Taom-baovao dia natao marobe ny filaharam-be toy ny dragona ary misy fampirantiana izay manasongadina indraindray ny biby mifehy ny famantarana ny zodiaka amin'io taona io.
El Ny dragona sinoa dia biby angano nentim-paharazana any Sina. Izy io koa dia ampahany amin'ny kolontsaina Aziatika hafa ary manana faritra maro hafa amin'ny biby hafa toy ny tandroky ny diera, ny fofon'alika, ny mizana avy amin'ny hazandrano na ny rambon'ny bibilava. Efa nandritra ny tarana-mpanjaka Han ny dragona dia hita ho ampahany amin'ny kolontsaina, an-jatony taona lasa izay. Rehefa nandeha ny fotoana dia nahazo fahefana isan-karazany izy io ary misy ifandraisany amin'ny fifehezana ny toetrandro toy ny orana. Nanjary tandindon'ny fahefana emperora koa izy io. Na izany aza, mampifandray ny dragona amin'ny kolotsaina sinoa isika rehetra ankehitriny.
Lanonana dite sinoa
Rehefa miresaka momba ny lanonana dite isika dia mieritreritra an'i Japon matetika, fa any Sina kosa ity zava-pisotro ity dia misy lanjany lehibe koa amin'ny fomban-drazan'izy ireo. Heverina ho zava-pisotro zava-mahadomelinaTaty aoriana dia lasa natsangan'ny kilasy ambony ho lasa lanonana ihany. Tehina telo no ampiasaina amin'ity lanonana ity. Amin'ny voalohany dia ampangotrahina ny rano, amin'ny faharoa avela hosotroina ny ravina ary amin'ny fahatelo dia sotroina ny dite.
Akanjo sinoa nentin-drazana
Ny akanjo dia mety ho iray amin'ireo lovantsofina sinoa malaza indrindra. Betsaka ny akanjo hita mazava amin'ny kolontsaina sinoa. ny qipao dia ohatra tsara, izy io dia akanjo iray efa lava tanany ilay taloha ary tsy tery loatra. Ampiasaina matetika amin'ny loko mena izy io, izay mitondra vintana. Ho faniriana hahafantatra fa misy loko voarara amin'ireo akanjo ireo toy ny mavo sy volamena mifandraika amin'ny amperora, volomparasy izay ho an'ny fianakavian'ny mpanjaka, fotsy izay feon'ny fisaonana na mainty izay noheverina ho loko tokony hananana tsy fahatokisana.
Andro fialantsasatra nentim-paharazana
Ho fanampin'ny Taom-baovao Sinoa voalaza etsy ambony na ny Fetibe Fanalaovana mahafinaritra, dia misy fety hafa manadanja any Shina hotandremana. ny Fetin'ny Qinming na ny Androm-panahy rehetra daty iray hafa manan-danja ho azy ireo izany. Ankalazaina amin'ny fiandohan'ny volana aprily mba hanomezam-boninahitra ny razana amin'ny alàlan'ny fitondrana sorona sy emboka manitra any amin'ny fasana sy tempoly. Ny Fetiben'ny Volana na ny Mid-Autumn Festival dia ankalazaina amin'ny datin'ny volana fahavalo koa, raha tena mamiratra indrindra. Ankalazaina any an-tanàna izy ireo ary mifototra amin'ny volana ny lohahevitra, miaraka amin'ny lanterne, jiro, haingon-trano ary matso. Andro fialantsasatra ihany koa io fihinanana Moon Cakes io, mofomamy fenoina voaomana manokana ho an'ity fotoana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Fomban-drazana any Sina